admin | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 989
>interviews and news stories on prisoner issue
> ရေးလိုက်ကြစို့သူငယ်ချင်း အပိုင်း-၃ဘလော့ဂ်ရေးသူများအတွက် ဇော်ဂျီဝမ်း ကကြီး-ခကွေးမိုးကုပ်စက်ဝိုင်းဇန်န၀ါရီ ၂၊ ၂၀၀၈ ဘလော့ဂ်ရေးသူများအတွက် ဘလော့ဂ်တွေအကြောင်း မိုးမခမှာရေးတာ အပိုင်း ၂ တုန်းက ဇာတ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ ရေးစရာတွေ ပေါ်လာလို့ အပိုင်း ၃...
> စလောင်းရုပ်ူမင်သုံးစြဲခငြ့် လိုင်စင်ခ အဆ ၁၀၀ ကေဵာ် စေဵူးမငြ့်ူပီး၂၀၀၈ိံစ်ြသစ်ကိုမန်မာူပည်ကုကိဆြိုမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ဇန်န၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၈ ယခင်ိံစ်ြမဵားက စလောင်းတပ်ဆင်ခငြ့် လိုင်စင်ေုကး ၆ ထောင်...
> မိုးမခတောထဲက သတင်းအပိုင်းအစမဵား – အလောင်းဘုရားဟာ ရခိုင်ဘုရင်ရဲႛသားတော်၊ ဗေဒင်ဆရာတေရြဲႛေူပာုကားခဵက် အဝေုးကည့်မနြ်ေူပာင်း ဇန်န၀ၝရီ ၁၊ ၂၀၀၇ အလောင်းဘုရားဟာ ရခိုင်ဘုရင်ရဲႛသားတော် အလောင်းမင်းတရားဋ္ဌကီး ဦးအောင်ဇေယဵဟာ ရေဘြိုဇာတိူဖစ်ပၝတယ်။ ရေဘြိုသားဆိုတော့ ဗမာပေၝ့။...
>ထနြ်ူးမင့်အောင် –ိံစ်ြသစ်ကူး အမတ်ြတရ
> အဝေးက၊ အနီးက၊ မဝေးမနီးကလုပ်ဖေၞကိုင်ဖက်တြေ အားလုံးသိုႛိံစ်ြသစ်ကူး အမတ်ြတရထနြ်ူးမင့်အောင်ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ အေူပာင်းအလဲ ဆိုလိုႛဟောင်း္ဘပီးရင် ဟောင်းအဟောင်းတကာ့ အဟောင်းဆုံးတေထြဲမြာအကောင်းဆုံးလေးတေကြို ငၝ ကောက်ရခဲ့တယ်၊ရာူပည့်၊ တည်ုကည်၊ ဟန်နီ၊Claude၊ Jame၊ ဝေယံ၊ မော်မော်လမင်း၊...
> အတု နဲႛ အစစ်မောင်စမြ်းရည်ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ အစိုးရ .. အတုရဲႚစစ်တပ် အတုကသံဃာအတုကို ခေဵမနြ်းရာ ။ သံဃာထုတငြ်းပစ်သငြ်းကဵည်ဆန်မန်ြခဵင်ရာကို မန်ြကဵည်ဆန် အတု မဟုတ်ပၝ။ ။ ၂၀၀၇ ဒီဇင်ဘာ...
>မာမာအေး – ဒီဇင်ဘာ အလမြ်း
> ဒီဇင်ဘာ အလမြ်းမာမာအေးဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ ခဵမ်ူးမိံငြ်းဖြေးတကိုယ်ရေးဋ္ဌကံနြိမ့်တုံမင့်တုံခမ်းဘုံ ဘာဝစိတ္ဇဇတေတြသ လငြ့်မေဵာအတောမသတ် “ဒီဇင်“ူဖတ်သော် “ခရင်္စမတ်” နေႛတနေႛတုန်းကရနြ်းပ တြဲယူုကင်သူလက်တြဲပြဲ မဂဿလာရက်မဟာလည်းကိုယ်ထည်းတယောက်တခေဵာက်ခေဵာက်ိံငြ့်လမ်းပေဵာက်နေဆဲရစ်ဝဲ၀ဲတည်း။ လြိက်လြဲ ဆြေးေူမႛသည်မေ့ ရင်မြာအုကင်နာတေလြာပၝ ယူပၝမ္တွဝေပၝလဵက်ထားရက်...
>မိုးမခ ရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီ – ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇
> မိုးမခ ရဲႚ ရေဒီယိုခဵစ်သူမဵား ဆစ်ဒနီဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၀၇ သတင်းတိုထြာ နဲႚ သီခဵင်းပဒေသာဒေၝက်တာအောင်ခင်၊ ရေဒြေၝင်ူးဖြ၊ သီးလေးသီး အူငိမ့်မင်းသမီးမဵာိးံငြ့်ိံစ်ြသစ်ကူိးံငြ့် လတ်ြလပ်ရေး အမတ်ြတရ အစီအစဉ်မဵား...
> စကဿာပူရောက် သီးလေးသီး ဆေးရောင်စုံ ၀ိုင်းတော်သားမဵာိးံငြ့် ဦးပန်တဵာ စကားလက်ဆုံမိုးမခ (ဆစ်ဒနီ)ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇အစီအစဉ် နားဆင်ရန် ဒီမြိာိံပ်ပၝ No tags for this post. Related...
> ဆစ်ဒနီူမြိႚူမန်မာစာသင်တန်းကေဵာင်း၁၈ုကိမ်ေူမာက် အထိမ်းအမတ်ြဒေၝက်တာ သန်ိးိုံင်ိံငြ့် စကားဝိုင်းမိုးမခ (ဆစ်ဒနီ) မြ ဦးပန်တဵာ တြေႚဆုံသည်ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၀၇အစီအစဉ်နားဆင်ရန် ဒီမြိာိံပ်ပၝ No tags for...
> ကဗဵာဆရာ ရဲႛ ကဗဵာဒီဇင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၀၇ No tags for this post. Related posts No related posts.
> ကာတနြ်း အိုးဝေ – ကာတနြ်း Dec 28th 2007 No tags for this post. Related posts No related posts.
Page 989 of 1,000«1...987988989990991...1000»